Moat: Edza Kutarisirwa kweVatengi Kunze Kwenzvimbo, Midziyo, uye Mapuratifomu
Moat naOracle ndeye yakazara analytics uye yekuyera chikuva icho chinopa suite yemhinduro pane kwese ver verse, kutarisisa analytics, kuyambuka-chikuva kusvika uye kuwanda, ROI mhedzisiro, uye kushambadzira uye kushambadzira njere. Yadzo yekuyera suite inosanganisira mhinduro dzekushambadzira kushambadza, kutarisisa, chengetedzo chengetedzo, kushambadzira kugona, uye kuyambuka-chikuva kusvika uye kuwanda. Kushanda nevashambadziri, zvigadzirwa, vamiririri, uye mapuratifomu, Moat inobatsira kusvika kune vangangove vatengi, kutora vatengi, uye kuyera mhedzisiro kuvhura mukana webhizinesi. Moat naOracle
Swaarm: Gadzirisa, Gadzirisa, uye Kuyera Yako Kushambadzira Performance
NeChishanu, Gumiguru 16, 2020 NeChishanu, Gumiguru 16, 2020 Douglas Karr
Swaarm inzvimbo-yekutevera yekutevera chikuva iyo inopa vamiririri, vashambadziri, uye network zvine hunyanzvi hwekuteedzera zvizere uye kudzora kwavo kushambadzira kuyedza-chaicho-nguva kuona kukura kunobatsira. Iyo chikuva chakagadzirwa kubva pasi kusvika pakuva nyore kushandisa, asi chine simba, iine data-inotyairwa mushandirapamwe automation kubatsira vashambadzi kubudirira kuyera uye kugadzirisa makampeni pamutengo wehupfumi. Panzvimbo pekumusoro-pasi nzira, isu takavaka ichi chigadzirwa pasi kumusoro. Kubva chaiko kubva chaiko
Yako Brand Playbook Yekununura Yakabudirira 2020 Mwaka weZororo
China, Gumiguru 15, 2020 China, Gumiguru 15, 2020 Michael Della Penna
Iyo COVID-19 denda yakave nekukanganisa kwakanyanya pahupenyu sekuziva kwedu. Tsika dzezviitiko zvedu zvezuva nezuva uye sarudzo, kusanganisira zvatinotenga uye nemabatiro atinoita izvi, zvachinja pasina chiratidzo chekudzokera munzira dzekare chero nguva munguva pfupi. Kuziva mazororo ari kukona, kugona kunzwisisa uye kutarisira maitiro evatengi panguva ino isingawanzo kubatikana yegore ichave yakakosha pakurapa kubudirira, kwakasarudzika.
Vaparidzi Vari Kurega Adtech Kuuraya Izvo Zvakanakira
China, Gumiguru 1, 2020 China, Gumiguru 1, 2020 Kenny Katzgrau
Iyo dandemutande ndiyo inesimba uye inyanzvi yekuumba kuti ivepo. Saka kana zvasvika pakushambadzira kwedhijitari, zvekugadzira zvinofanirwa kunge zvisina muganho. Muparidzi anofanirwa, mune dzidziso, kugona kusiyanisa zvakanyanya kit yayo midhiya kubva kune vamwe vaparidzi kuti vakunde kutengesa kwakananga uye kuendesa zvisingaenzaniswi maitiro uye mashandiro kune avo vavanoshanda navo. Asi ivo havadaro - nekuti ivo vakatarisisa pane izvo ad tech inoti vaparidzi vanofanira kuita, uye kwete izvo zvinhu ivo